बाल स्वास्थ्य « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । आज र भोली देशभर पाँच बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै छ । राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम अन्तरगर्त छ महिना देखि ५ बर्ष
कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा ‘बालबालिका’
नेपाल हेल्थ न्युज, सोल/लन्डन । वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अध्ययनमा बालबालिकाको नाकमा तीन सातासम्म कोरोना भाइरस रहन सक्ने देखिएको छ । दक्षिण कोरियाका वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको हो । यसअघिका अध्ययनमा अधिकांश
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकामा सरोकार निकायले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उचाई बढाउन सकिन्छ ? जानौँ ।
हाम्रो समाजमा होचा कद भएका मानिसहरु धेरै छन् । उचाई कम हुनुलाई कतिपयले नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गर्दछन् । उनीहरुलाई डल्ले/डल्ली, पुड्के / पुड्की लगाएतका अनेक उपनामले बोलाउने र जिस्काउने गरिन्छ
जनस्वास्थ्य सरोकार, चितवन । नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन सबै प्रदेशका आठवटा सरकारी अस्पतालमा सुसार कार्यक्रम शुरु गरिएकोे छ । नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर गोल्डेन कम्युनिटीले गत वैशाखबाट यो कार्यक्रम अस्पतालमा
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा अत्याधुनिक बाल सघन उपचार केन्द्र सञ्चालन
जनस्वास्थ्य सरोकार, ललितपुर । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको बाल सघन उपचार केन्द्र अर्थात पि.आइ.सि. युुको बुधबार उद्घाटन गरिएको छ । २४सै घण्टा ७ दिन सञ्चालनमा रहने बालबालिकाकै लागि समर्पित सघन उपचार
सामाजिक सञ्जालको कुलत: प्रयोगकर्तासम्बन्धी तथ्याङ्क कम्पनीले दिनुपर्ने डाक्टरहरूको माग
ब्रिटेनका अग्रणी मनोचिकित्सकहरूले भनेका छन्- इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई तिनीहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउने हो भने बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा सोसल मिडिया भनिने सामाजिक सञ्जालले पुर्याउने फाइदा र जोखिमका बारेमा
बालबालिकामा व्यायामको कमी एक विश्वव्यापी समस्या
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । संसारभरका ८० प्रतिशत ११ देखि १७ वर्षका बालबालिका र युवाहरूले आवश्यक शरीरिक गतिविधि नगर्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले यसका कारण बालबालिका
किन हुन्छ बालबालिकालाई दम ?
वायुप्रदुषणका कारण शहरी क्षेत्रमा दम रोगीहरुको सँख्या बढ्दै गइरहेका छन् । वायुप्रदुषणबाट बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । साथै वायुप्रदुषले दमका रोगीहरुलाई समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर
दिल्लीको विषाक्त वायु प्रदुषणले ‘हाम्रा बच्चाहरु मरिरहेका छन्’
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । प्रदुषित शहरमा जन्मेका बच्चा पहिलो दिन देखिनै चुरोटको अम्मली जस्तो हुन पुग्छन् । दील्लीको वायु प्रदुषण विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षित सीमा भन्दा बीस गुण बढी रहेको